Home Wararka Xundubeey oo dagaal iclaamiyay & barakac cusub oo Muqdisho ka bilaawday
Xundubeey oo dagaal iclaamiyay & barakac cusub oo Muqdisho ka bilaawday
Wasiirka Amniga DFS oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa si dadban u iclaamiyay in dowlada ay dagaal ku qaadi doonto waxa uu ku sheegay Mooryaan iyo maleeshiyaad beeleedyo qabsaday guryo ay leeyihiin dad shacab ah.
Hadalalka ka soo yeeray Xundueey ayaa ah mid lagu baneeysanayo dhiiga dadka. Waxaa kale sheegay in wax laga xumaado tahay in shacabka Magaalada Muqdisho dhibaato loo horseedo. Wasiirka Amniga ayaa sheegay in ay cabsi ka qabaan meel walbo oo uu ka socdo abaabul aan sharci ahyn in ay kusoo dhuuntaan Al-Shabaab oo laga yaabo in ay ka faa’iideystaan fursadna ka dhigtaan isla markaan meelahaas gabaad ka dhigtaan.
Xundubeey oo ku hadlaya magaca Farmaajo ayaa sheegay in Dowlad ay awood leedahay Sugida amniga isla markaan uu ku filanyahay ciidanka ay heysato balse ay u turaayeen shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay diidanaayeen in ay ku kor dagaalamaan dadka Shacabka ah. Wasiirka ayaa shacabka Muqdisho ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga isla markaana aysan ogolaan nabadii ay dhibka badan lagu dhaliyey in ay si fudud ku lunto.